पूर्वको हङकङ सुनसान
कुनै समय पूर्वी झापाको धुलाबारी बजार पूर्वको हङकङ बजारको उपनामले चिनिन्थ्यो । धुलाबारी बजारमा कपडा र सजावटका सामान किन्न नेपालीमात्र होइन भारतीय कलाकारदेखि सर्वसाधारणको समेत भीड लाग्थ्यो ।
मुलुकमा हाल सञ्चालनमा रहेका कूल ३१ भन्सारमध्ये सात भन्सारबाट निर्यात शून्य रहेको पाइएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको पाँच महीनाको तथ्याङ्कअनुसार जलेश्वर, सुनसरी, जनकपुर, सर्लाही, भद्रपुर तथा अन्य दुई भन्सारबाट निर्यात शून्य रहेको छ ।
वर्सेनि १२ करोडको जुनार कुहिँदै
जुनारको राजधानीका रूपमा परिचित सिन्धुलीले जुनारबाट वर्सेनि करोडौं रकम घाटा बेहोर्दै आएको छ । जुनारमा देखिएको सुन्तला जात फलफूलको फल कुहाउने औँसा पार्ने झिंगा (ब्याक्ट्रोसेरा मिन्याक्स चाइनिज सिट्रस प्लाई) का कारण करोडौं रकम घाटा बेहोर्न किसान बाध्य भएका हुन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाई (जुनार सुपरजोन) का प्रमुख देवराज अधिकारीका अनुसार जुनारमा देखिएको झिँगाले वर्सेनि १२ करोड रूपैयाँ रकम बराबरको जुनार झार्ने तथा कुहाउने गरेको छ । विगत ४ वर्षदेखि जिल्लामा यसको प्रभावले जुनार उत्पादनमा कमी आइरहेको उनले बताए ।
निर्माण व्यवसायीको रकम चाँडै भुक्तान गरिने : अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निर्माण व्यवसायीको रकम चाँडै भुक्तान गरिने बताएका छन् । आफ्नै कार्यकक्ष सिंहदरबारमा सोमबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले व्यवसायीलाई भुक्तान गर्नुपर्ने रकमको यकीन विवरण प्राप्त नभएकाले केही समस्या आएको बताए ।
स्थानीय तहले हचुवामै कर लगाएको निष्कर्ष
पाँच महिनामा ६ खर्बको आयात, ३७ अर्बको निर्यात
चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा मुलुकमा ६ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँको सामान आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनमा आयातमा ३३.८ प्रतिशले वृद्धि भइ सो रकम बराबरको सामान आयात भएको हो ।
ट्याक्सी भाडादर वैज्ञानिक बनाउन माग
‘सार्वजनिक यातायात (ट्याक्सी) सुधारका लागि साझा पहल’ नामक अभियानले वैज्ञानिक भाडादर कायम गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । आइतबार एक पत्रकार सम्मेलन गरेर राज्य, उपभोत्ता र ट्याक्सी चालकहरूबीचमा देखिएको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न साझा पहलको सुरुवात गरेको जानकारी दिइएको हो ।
नेपाल–श्रीलंकाबीच आर्थिक सहकार्यमा जोड
नेपाल र श्रीलंकाका अधिकारीहरूले दुई देशबीच आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्न जोड दिएका छन् । काठमाडौंस्थित श्रीलंकाली राजदूतावास र नेपाल–श्रीलंका चेम्बर अफ कमर्श एन्ड इन्ड्रष्टिजको संयुक्त आयोजनामा आर्थिक सम्बन्ध विस्तारका बिषयमा भएको छलफलमा यस्तो जोड दिइएको हो ।
प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउने लक्ष्य
प्रदेश नम्बर ३ को नीति तथा योजना आयोगले पहिलो आवधिक योजना तयार गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि आब २०८०/८१ सम्मका लागि आयोगले महत्वाकांक्षी पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदा तयार गरेको हो ।
पाँच महिनामा लक्ष्यभन्दा कम राजस्व
आन्तरिक राजश्व कार्यालय नेपालगन्जले चालू आर्थिक वर्षको ५ महिनामा लक्ष्यभन्दा १० प्रतिशत कम राजस्व संकलन गरेको छ । कार्यालयले चालू आवको साउनदेखि मंसिरसम्म १ अर्ब २१ करोड ६७ लाख ५७ हजार राजस्व संकलन गरेको हो । यो लक्ष्यको ९०.७९ प्रतिशत हो । कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको सो अवधिमा १ अर्ब ३४ करोड १ लाख ५५ हजार संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
निर्यातजन्य उद्योगलाई दोब्बर अनुदान
सरकारले स्वदेशी निर्यातयोग्य उद्योगलाई प्रोत्साहन पुग्ने गरी निर्यातमा पाँच प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । मुलुकमा आयात बढीरहेका बेला स्वदेशी वस्तुको निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सरकारले पाँच प्रतिशत अनुदान दिने भएको हो । निर्यातजन्य उद्योगले वस्तु निर्यात गरेवापत तीनदेखि पाँच प्रतिशतसम्म अनुदान रकम पाउने छन् । यसअघि निर्यातजन्य उद्योगलाई निर्यात अनुदान दुई प्रतिशत थियो ।
२६ करोडको सुन्तला उत्पादन
गुल्मीमा यो वर्ष सुन्तला उत्पादनमा वृद्धि भएको छ । यसवर्ष ६ हजार ४६८ मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीका प्रमुख चक्रपाणि पन्थीले जानकारी दिए । अघिल्लो वर्ष गुल्मीमा २ हजार २०५ मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको थियो ।
निर्यातजन्य उद्योगलाई दोव्बर अनुदान
सरकारले स्वदेशी निर्यातयोग्य उद्योगलाई प्रोत्साहन पुग्ने गरी निर्यातमा पाँच प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेश–१ दूधमा आत्मनिर्भर
प्रदेश नम्बर १ दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएको छ । पहाडी र तराई क्षेत्रमा व्यावसायिक गाईपालनका कारण दूधको उत्पादन बढेको हो । यो प्रदेशमा दैनिक ३० हजार लिटर दूध मागभन्दा बढी उत्पादन भइरहेको छ । उत्पादनअनुसार खपत क्षमता नहुँदा कृषक चिन्तित भएका छन् । दूधको खपत बढाउन भारतलगायतका मुलुकबाट आयात हुने धुलो दूध प्रतिस्थापन गर्न कृषकले माग गरेका छन् ।
निजी क्षेत्रको सहभागितामा चैतमा लगानी सम्मेलन